Izici cuisine ngesiGreki. ushizi fetaksa
Namuhla, ukuthandwa Amazing phakathi abahambi ukujabulela Greece. imibono yayo obumangalisayo ezikhangayo ngeke ikuthinte okuthatha ngokuvakashela lizwe.
Ubuhle bazo iyamangalisa futhi abakwazi ukushiya ubani ngabandayo. Ugu Mediterranean nakho kuyanda lokhu isimo. Nokho, izivakashi zihlale kubalulekile, hhayi kuphela izinto ukubukwa, kodwa futhi cuisine bendabuko zezwe olivakashelayo. Greece futhi bheka kwakunomuntu nasici - yayo cuisine abaziwa umhlaba wonke, okuyinto has a ezihlukahlukene izitsha bendabuko ongancintisana okuhlukahlukene ethandwa kakhulu emhlabeni, njenge-Italian, Japanese nabanye.
Okwavelela cuisine ngesiGreki kungenziwa ngokuthi ushizi. Hhayi evamile, izimvu yasekuqaleni, okuyinto kuveza kuphela Greece. Lokhu uju emangalisayo okuthiwa ushizi fetaksa. Ungadliwa ukuthi ukusebenzisa umkhiqizo yasekuqaleni, kukhona kuningi kakhulu. Ethandwa kakhulu kulo bayizinkulungwane isaladi "ngesiGreki", isici okuyinto ngokunembile lokhu isithako. He is zithandwa emazweni amaningi emhlabeni wonke.
Ukuze silungiselele isaladi "ngesiGreki" ushizi fetaksa, kumelwe uthathe inani elilingana pepper amnandi, ukhukhamba, utamatisi no-anyanisi obomvu. Zonke imifino kufanele uthathe cubes ezinkulu noma okunye sibe yimichilo esikhulu, bese uhlanganise nabo inkathi amafutha, okuyinto, efana ushizi fetaksa luyinto esemqoka kakhulu ye-sebuningini izitsha ngesiGreki. Imifino kufanele bafake isidlo, bese uthathe cubes ushizi ufafaza nabo ekulungele ukwelapha. Futhi, ukunambitheka lokhu isaladi kungenziwa ngcono ngosizo iminqumo, ezibekwe phezu imifino noma ugovuze kubo ngesikhathi esisodwa ngazo zonke izithako. Indishi eqeda ushizi zibekwe phezu ungakwazi ufafaze esincane uviniga, okuyinto wayeyomnika iphunga alibaleke ukunambitheka ukukhanya we original.
Fetaksa ushizi - umkhiqizo eyenziwe imvu noma okunye (ezimweni ezingajwayelekile) ubisi inkomazi. It has a ukuthungwa kungabukeki futhi oyisififane ezakheke, ngakho-ke akufanele exutshwe nezinye izithako izitsha, kungcono kakhulu ukuvele ukuhlobisa it isaladi phezulu, kungenjalo wonke ushizi uchoboze ulahlekelwa ubuhle yayo yasekuqaleni. It is ilahleke kuphela ukubukeka kodwa ukunambitha izinga izitsha. Ushizi fetaksa - the brine, isikhathi sakho ukuguga izinyanga okungenani ezintathu noma ezine. Njengazo zonke imikhiqizo efanayo, ukugcina ngcono e brine. Kufanele kukhunjulwe ukuthi lesi ushizi anosawoti omningi, kubalulekile ukuthi uma ungeza usawoti isidlo. Okungukuthi, kufanele uthele kancane nge ukulindela ukuthi ngokusebenzisa isidlo fetakse uzoba okunosawoti kancane.
Fetaksa ushizi - umkhiqizo iMedithera, okuyinto kuveza kuphela Greece. On ulwanga, akusiyo anosawoti omningi kakhulu, kuhlangene kahle imikhiqizo eminingi. Kuyinto isithako izitsha eziningi kokubili ukudla okuhlukahlukene ngesiGreki kanye nezinye. Isetshenziselwa ukulungiselela salads ahlukahlukene, nama-dessert namakhekhe. Eqinisweni ezithakazelisayo: ku fetaksoy EU kungenziwa ngokuthi kuphela ushizi, okuyinto wawenziwe eGreece.
Zokupheka Original pancake ku Shrove ngoLwesibili
Isilinganiso imvubelo elomile fresh kvass, noma baking ubhiya ezenziwe ekhaya
Indlela ukupheka impande kanye Isiqu ka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Indlela yokwenza ikhaya-phisa
Indlela ukupheka ithanga iphalishi: zokupheka elula
Kungani ungaqali umdlalo World of Tanks?
Izimonyo eyingqayizivele okukhethekile deaura
Umshini wokuwasha LG F1089ND: ukubuyekezwa kanye Ukucaciswa
"Varfeys": ukuqaliswa kanye impumelelo
Syria, Hama: Umlando kanye nencazelo
Kungani owesifazane akafuni indoda? izizathu
Phrinta Solitude: izimpawu umqhele ukungashadi
Idlalwa kanjani "Battleship": imithetho yalo mdlalo
Patrick Stump: Biography nomndeni. Patrick Stump ngaphambi nangemva kwesisindo
Enterovirus meningitis: izimpawu
Southern Ihhotela (Dagomys, Sochi): Ikheli, ukubuyekezwa
Amethyst. Zodiac, magic zamatshe wemvelo